အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Wouter Jurgens နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Created By : 26-Oct-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 112
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens နှင့်အဖွဲ့အား ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၅:ဝဝနာရီအချိန်က နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
Created By : 22-Oct-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 142
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာနတို့ အကြား နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အလုပ်သဘောလေ့လာရေးခရီးအဖြစ် ရောက်ရှိနေသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီ မှ ၁၁၃၀ နာရီထိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများက အသင်းချုပ်၏သမိုင်းကြောင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နှင့် ပူးပေါင်း၍ အဂတိလိုက်စားမှုအား ဆန့်ကျင်ခြင်းပူးတွဲကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုးထားရှိမှု၊ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်နေမှုတို့အား ရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ GIV အဖွဲ့မှ သိရှိလိုသည်များအား ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား တွေ့ဆုံခြင်း
Created By : 20-Oct-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 113
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာနတို့ အကြား နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အလုပ်သဘော လေ့လာရေးခရီးအဖြစ် ရောက်ရှိ နေသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာန (GIV) မှ ဒုတိယ အကြီးအကဲ H.E. Mr. Dong Coung Huan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ၁၄၃၀ နာရီ မှ ၁၅၀၀ နာရီထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်မင်း ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြ ကြရာ GIV အဖွဲ့မှ သိရှိလိုသည်များအား ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်ရှိ မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံ
Created By : 17-Oct-2018	Published In: လက်ခံတွေ့ဆုံမှု Hits: 118
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇)
မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဝင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ အစိုးရစစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဒုတိယအကြီးအကဲ H.E. Mr.Dang Cong Huan ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်ရှိ မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်တွင် ယနေ့နံနက် (၁၁:ဝ၀)နာရီအချိန်၌ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Showing9to 12 of 21 (6 Pages)